POLITIKA : Hanova governemanta indray hoe i Hery Rajaonarimampianina ?
Nitafa mivantana tamin’ireo mponina tao Betafo i Marc Ravalomanana, Filoham-pirenena telo aloha nandritra ny diany tany an-toerana, afak’omaly. 21 décembre 2017
« Tsy resaka an-dalambe intsony fa tena marina ny fanovàna governemanta tadiavin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina hatao ». Izay no nambaran’ny mpiara-miasa akaiky ny minisitra iray sendra tafaresaka taminay omaly.
Teren’ny Fianakaviambe iraisam-pirenena hono ingahy filoha hanova ny governemanta misy ankehitriny ary hanangana iray hafa ahitana ankolafy politika samihafa. « Tokony efa notanterahana ny fananganana izany governemanta vaovao izany fa mety misy nangataka ny hanaovana izany aorian’ny fety angamba ny ministra sasany fa indrindra ireo tsy mahatoky tena ho tafajanona », hoy ny fanazavana nataon’ity mpiara-miasa akaiky ny ministra ity.
Nambaran’ity farany hatrany fa maromaro ireo minisitra hoesorina amin’ny toerany. Na izany na tsy izany, tsy mivaky loha amin’ny mety hanovàna na tsia ny governemanta izay tarihin’ingahy Mahafaly Olivier ny ankamaroan’ny vahoaka. Ho an’ireto farany tsy hanova na inona na inona amin’ny fiainany ny fanovana governemanta.
« Tompon’antoka voalohany ny filoha »
« Aza ailika amin’ny mpikambana ao amin’ny governemanta fotsiny ny fahoriana mianjady amin’ny vahoaka malagasy fa tompon’antoka voalohany na tiany na tsy tiany ny filoha Hery Rajaonarimampianina », hoy ny mpivarotra mofo gasy iray ao 67ha rehefa nanontaniana ny heviny. « Tokony hametra-pialana i Hery Rajaonarimampianina raha tiany tokoa ny vahoaka malagasy », hoy hatrany ity farany. Azo antoka fa tsy hanao izany velively ingahy filoha. Izy aza mbola mitady fomba rehetra hitazomany ny sezany amin’ny taona 2018.
Tsy matoky tena Ingahy Mahafaly Olivier
Raha izay no nambaran’ity mpiara-miasa akaiky ny minisitra ity dia nilaza kosa ny mpanolotsain’ny praiministra Mahafaly Olivier iray tao amin’ny toerana fisakafoanana iray ao 67ha fa tsy matoky tena intsony hono ny Patiraony. « Samia miomana isika fa mety tsy ho eo intsony amin’ny volana janoary ho avy izao ». Izany hono no nambaran’ingahy Mahafaly Olivier azy ireo. Mitombona tokoa ve ny feo mandeha fa mety hoesorina amin’ny toerana maha praiministra azy ingahy Mahafaly Olivier ?
Asa aloha. Ho hitantsika eo ny hataon’ingahy Hery Rajaonarimampianina e e e ! Noheverin’ity farany tsy ho tonga angamba ny taona 2018 ka izao mikoropaka tahaka ny saka anaty harona ary mitady ny fomba rehetra hanilihana ny sasany amin’ny fifidianana manaraka.